महागुरु फाल्गुनन्दका दश जीवन दर्शन - Sainokhabar
होमपेज / विचार / महागुरु फाल्गुनन्दका दश जीवन दर्शन
-आङ्बुहाङ अवोध अविरल
महागुरु फाल्गुनन्दले अहिंसामा जोड गर्नुहुन्थ्यो । ‘अरुलाई मार्न वा दुखाउनुका निम्ति गरिने हिंस्रक व्यवहार’ हिंसा हो । हिंसा शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा गरिन्छ । समाजमा घरेलु, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिकलगायतका हिंसाहरु हुने गर्दछन् । यसका साथै समाजमा पशु हिंसा पनि गरिन्छ । महागुरु फाल्गुनन्दको पहलमा वि.सं. १९९८ साल बैशाखमा पान्थरको लब्रेमा पारित गरेको सत्यधर्म मुचुल्कामा बलिपूजा नगर्ने उल्लेख छ । मानिसले हजारौं वर्षदेखि मानव केन्द्रित संकथन (भनाई) निर्माण गर्दै आएको छ । मानिसले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रुपमा व्याख्या गर्ने गर्दछ । अन्य प्राणीहरुलाई तल्लो दर्जाका, पशु, आत्मा नभएको र विवेक नभएको प्राणीको रुपमा व्याख्या गर्दछ । धर्मदर्शन र विज्ञानले समेत मानिस र पशुबीचमा ‘हाइरार्की’ (सिढी) निर्माण गरेको छ । पशु तल्लो दर्जाको प्राणी भएकाले मार्न, खान र बली दिन हुन्छ भन्ने मान्यता हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएको छ । मानिसले आफ्नो मनोकांक्षा पूरा होस् भने पशुबली गर्दछन् । महागुरुले पशुबलीलाई जीव हिंसाका रुपमा व्याख्या गर्दै समाजले निर्माण गरेको हाइरार्कीलाई भत्काउनु भएको छ । वहाँका अनुसार मानिस र पशु सबै माङका सन्तान हुन् । आफ्नै सन्तानलाई मारेर चढाउँदा माङ बेखुशी हुने वहाँको तर्क थियो ।
नेपाल, भारत, भुटान र वर्माका विभिन्न स्थानमा पुगेर विरामी तथा दुःखीहरुका निम्ति माङसेवा तथा जडीबुटीबाट उपचार गर्नुभयो महागुरुले । वि. सं. २००१ मा काठमाण्डौंका जनरल विक्रम शमसेर जबरालाई र उनकी श्रीमतीलाई उपकार गर्न महागुरु फाल्गुनन्दलाई दरबारमा बोलाइएको वहाँको जीवनीमा उल्लेख छ । वहाँलाई ‘पूर्वी लिम्बुवान पल्लो किरातमा एकजना तपस्वी लिम्बू ठूला गुरु’ भनेर लिन एक सिपाई पठाइएको थियो । महागुरु दरबार पुगेर उनीहरुको उपकार गर्नुभयो, उनीहरु निको भए । महागुरुले दुःखीका निम्ति निशुल्क सेवा गर्नुहुन्थ्यो । वहाँलाई जनरलले ‘उपकार वापत ५०० रुपैयाँ भेटी राखि विदा दिन खोज्दा आफूले उपकार वापत कहिल्यै रुपैया पैसा लिने नगरेको’ बताउनुभयो । वहाँको मृत्युको अन्तिम पलसम्म पनि दुःखी र बिमारीको उपकार र सेवामै बितेको थियो ।लामो समय बिराम भएका विरामीहरु वहाँले उपकार गरेपछि सजिलै निको हुन्थे । महागुरु फाल्गुनन्द जहाँ पुगे पनि विरामीको लाइन लाग्थे । वहाँ आफैमा योग साधनाबाट माङगेप्मा (निर्वाण) गर्नुभएको थियो । योग विज्ञानका अनुसार योग साधनका माध्यमबाट आफूभित्र रहेको अतभूत शक्तिलाई कुनै अंगमा केन्द्रीत गर्न सक्छन् । यसरी शरीरको कुनै अंगमा केन्द्रीत गरेको विरामीलाई उपचार गर्न सकिन्छ । यसलाई ‘रेकी’ भनिन्छ । गौतम बुद्ध र फाल्गनन्द विरामका अगाडि गइदिए पनि विरामी निको हुने गरेको सुन्न, पढ्न पाइन्छ । महागुरु फाल्गुनन्दबाट हामीले सिक्नु पर्ने कुरा मानव सेवा हो ।
लोकतन्त्रप्रति महागुरुको विशेष आस्था रहेको थियो । वहाँले शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, धर्म र मुन्धुमका विषयमा एउटा ठूलो चुम्लुङ गर्नुभयो । महागुरुले लबे्रेमा चुम्लुङ सञ्चालन भइरहेको बेला मुलुकमा चरम निरंकुश राणा शासन थियो । राणा शासकहरुको बोलीनै त्यतिबेलाको कानून हुने गर्दथ्यो । राज्यलाई बाहेक अरुलाई सभा, सम्मेलन गर्ने छुट थिएन । त्यसबेला वहाँले चुम्लुङबाट ‘सत्यधर्म मुचुल्का’ निर्माण गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुभयो । महागुरुले वि. सं. १९९० को एकदिन ताप्लेजुङ निगुरादेन चिलिङसेमा चेलाहरुलाई ‘हाङले चिहोत्, चिहोत् केमेत्तीबेन् आनिङवाबेले मेखोप्तुन्’ भन्नुभयो । वहाँले भन्नुभएको थियो—राजाले गरेको शोषण, दमन मैले सहन सकेको छैन् । महागुरुले भन्नुभएको थियो, ‘हाङिले केफितिगर थिक्यान, नियान युङ मेनगर पेक ।’ राजाले तिमीलाई हेरे केही दिन बस्छ, नत्र उनको शासन ढल्छ ।
– माङ्सेबुङ न्युज अनलाइन